Iingqwalaselo eziphambili xa ukhetha iNkqubo yokuThengisa (i-POS) | Martech Zone
Ukuqwalaselwa okuphambili xa ukhetha iNkqubo yokuThengisa (i-POS)
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 27, 2019 NgoLwesihlanu, ngoDisemba 27, 2019 Douglas Karr
Indawo yokuthengisa (POS) izisombululo bezikade zilula, kodwa ngoku kukho uluhlu olubanzi lwezinto onokukhetha kuzo, nganye inikezela ngeempawu ezizodwa. Umelele inkonzo yokuthengisa inqaku ingenza ukuba inkampani yakho isebenze ngakumbi kwaye ibe nefuthe elihle kumgca ongezantsi.
A Indawo yokuthengisa Inkqubo yindibaniselwano yezixhobo zekhompyutha kunye nesoftware eyenza ukuba umrhwebi athengise kwaye aqokelele iintlawulo kwintengiso yendawo. Iinkqubo ze-POS zale mihla zinokusekwa kwisoftware kwaye zingasebenzisa nayiphi na ifowuni ephathekayo, ithebhulethi, okanye idesktop. Iinkqubo ze-POS zesiko zihlala zibandakanya izixhobo zokuthengisa kunye nenkxaso yescreen sokudibanisa kunye nokudityaniswa kwemali yedrowa.
Eli nqaku liza kugubungela yonke into oyifunayo ukuze ukhethe indawo efanelekileyo yokuthengisa isoftware kwishishini lakho. Ngezisombululo ezininzi ezahlukileyo ezikhoyo, kubalulekile ukuba wenze uphando kwangaphambi kokuchonga olhambelana neemfuno zebrendi yakho.
Ngaba iNyaniso yeNkqubo yokuThengisa iyimfuneko?
Amanye amashishini azama ukunciphisa iindleko ngokwenza ngaphandle kwesisombululo sentengiso, kodwa olu tyalo-mali lunakho yenzela inkampani yakho imali. Imali encinci oyichithayo ekubhaliseni ayiyonto xa ithelekiswa nexesha kunye nemali oza kuyigcina yonke imihla yokusebenza.
Ukongeza ekusebenziseni ukuthengiselana, indawo yangoku yokuthengisa izicelo zinikezela ngeseti enkulu yezixhobo eziyilelwe ukwenza ukuba yonke imiba yeshishini lakho iqhubeke ngokutyibilikayo. Ukuba ufuna ukugxila kubudlelwane babathengi, umzekelo, unokufumana indawo yezisombululo zentengiso ezibandakanya iinkqubo zokunyaniseka kunye nezinye izinto ezibalulekileyo. Ngaphaya koko, iinkonzo ezininzi zidibanisa ngaphandle komthungo kunye nezinye izicelo ezithandwayo ezinje ngeShopify kunye neXero.
Iinkqubo ezahlukeneyo zeshishini ezahlukeneyo
Iinkonzo zenqaku lokuthengisa zijolise kuseto lweenkampani ezahlukeneyo kubandakanya abathengisi abakwi-Intanethi kunye namashishini aneevenkile ezibonakalayo. Unoko engqondweni, akufuneki ube nangxaki yokufumana ukhetho olufana nohlahlo-lwabiwo mali kunye nobungakanani bebhrendi yakho.
Ukuqhubela phambili ngakumbi, ngakumbi nangakumbi iinkqubo zihambela kwindlela esekwe kwilifu ebeka ulwazi kwindawo enye ngokungalunqamli kwinto nganye. Ngelixa iinkqubo zemveli zisafumaneka, ezinye ezisekwe kwilifu Ziya zisanda ngokwanda.
Ukuqwalaselwa okuphambili xa ukhetha iPOS
isibulali -Iindawo ezahlukeneyo zeenkqubo zentengiso ziyilelwe ukusebenza ngeentlobo ezahlukeneyo zekhompyuter, kwaye kuya kufuneka ujonge iindleko zehardware xa uthelekisa ukhetho lwakho. Ukuba uyakwazi ukuqhuba i-POS ngefowuni nje, umzekelo, ulungelelanisa ukusebenza ngelixa usongeza kwintloko encinci. Kwelinye icala, iinkqubo ezithile zisebenza ngcono ngamacwecwe okanye izixhobo ezinikezelweyo, ezinokukhokelela kwiindleko ezinkulu ngakumbi. Ngapha koko, amashishini amakhulu kunye neeresityu zihlala zifuna uluhlu olubanzi lwezixhobo, kubandakanya izinto ezinje ngeeprinta zerisithi, iiterminal zolawulo lwetheyibhile, nokunye okuninzi.
Iintlawulo Zentlawulo -Ukuthenga inkqubo ye-POS akuthethi ngokuzenzekelayo ukuba udibanise iindlela zokuhlawulwa kwekhadi letyala. Ngelixa uninzi lweenkqubo ze-POS ziza ngaphambili zilungiselelwe umfundi wekhadi letyala, ezinye zinokufuna ukumiselwa, ezinokubiza. Fumana i-POS kunye nomfundi wekhadi odibeneyo okanye enye enokudibanisa nomfundi wekhadi lokuthenga ngetyala kwiprosesa yakho yokuhlawula kunye nesango.
Umdibaniso weqela lesithathu -Amashishini amaninzi sele esebenzisa izixhobo zokuvelisa, kwaye kubalulekile ukufumana inqaku lenkonzo yentengiso esebenza kakuhle ngeendlela zakho ezikhoyo. Ukudityaniswa okudumileyo kubandakanya iinkqubo zokunikwa kwengxelo, iinkqubo zolawulo lwabasebenzi, iinkqubo zempahla, iinkqubo zokunyaniseka kwabathengi, kunye neenkonzo zokuhambisa. Inkqubo yentengiso yesikwere, umzekelo, idityaniswa kwiqonga lamaqela esithathu kuyo yonke into ukusuka kwi-eCommerce ukuya kwintengiso kunye ne-accounting. Ngaphandle kokudityaniswa, ukongeza iinkonzo ezintsha kwizicwangciso zombutho wakho kunokuba nzima ukwenza imisebenzi ephambili. Indawo yeenkqubo zentengiso konke malunga nokusebenza kakuhle, ke kuyaphikisana ukusebenzisa iqonga elinganxibelelani nezinye iinkqubo. Umzekelo, ukungenisa ngokuzenzekelayo ukuthengiselana kwinkonzo yobalo kusebenza ngakumbi kunokuhambisa ngesandla phakathi kweapps.
ukhuseleko -Abathengi bathatha imfihlo yabo ngokungathí sina kunakuqala, kwaye ii-hacks zedatha ziyamangalisa phakathi kwamashishini abo bonke ubungakanani. Abaphathi bahlala bekujongela phantsi ukubaluleka kokugcina idatha ikhuselekile, kwaye oku kubaluleke ngakumbi xa abathengi bebonelela ngolwazi olubuthathaka olufana neenombolo zamakhadi etyala. Inkqubo ye- Icandelo lekhadi lokuhlawula ichaza imigangatho yokhuseleko efanelekileyo yenqanaba leenkqubo zentengiso kunye nezinye iindlela zokwenza intlawulo. Iinkqubo ezaziwayo ngokubanzi ziyahambelana nale migangatho, kodwa unokujonga nokhuselo olomeleleyo, njengokwenza uphawu lwedatha kunye nokuphelisa ukubethela. Ukhuseleko kufuneka lube lolunye lwezinto eziphambili ngokubaluleka xa ufuna usetyenziso lwePOS oluthembekileyo.
inkxaso -Ukuba awucingi ngenkxaso njengeyona nto ibalulekileyo, kodwa inethiwekhi yenkxaso engalunganga inokwenza ukuba inkqubo yakho yentengiso ibenzima kakhulu ukuyisebenzisa. Izinketho ezinokuthenjwa zibonelela ngenkxaso engaguqukiyo kwaye zikuncede ekusombululeni iingxaki ngaphambi kokuba zibe nefuthe elibi kwishishini lakho. Ukuba kunokwenzeka, kuya kufuneka ujonge inkonzo enikezela ngenkxaso nge-24/7. Kubalulekile ukwazi ukuba umntu uza kuphendula nanini na unengxaki nenkqubo. Ezinye izicelo zide zinike abasebenzisi abatsha uncedo kwisiza njengoko beseta inkonzo okokuqala. Amashishini amancinci ahlala eyeka ukutyala imali kwindawo yesisombululo sentengiso, kodwa ukubhaliswa okuphezulu kungakulungela iinkampani ezimalunga nabuphi na ubungakanani. Ezi zezinye zezona zinto zibalulekileyo ekufuneka uzigcine engqondweni xa uthelekisa iinkonzo zentengiso.
tags: IPOS yelifuipost esekwe kwilifuImboleko ephathekayoisango lokuhlawulaposiposi yezixhoboisoftware posisikrini esibanjwayo